Maamulaha Kooxda Barcelona Mateu Alemany Oo Ka Hadlay Qorshaha Kooxda Ee Suuqa Kala Iibsiga Bisha January
HomeWararka CiyaarahaMaamulaha kooxda Barcelona Mateu Alemany oo ka hadlay qorshaha kooxda ee suuqa kala iibsiga bisha January
Maamulaha kooxda Barcelona Mateu Alemany ayaa sheegay in ayna haatan jirin wax “suurgal ah” oo ay kooxdu ku samayn karto saxiixyo inta lagu guda jiro suuqa January.
Kooxda reer Catalan ayaa wali la dhibtoonaysa dhaqaale ahaan laakiin waxa ay sii socotaa in lala xidhiidhiyo tiro ciyaartoy ah, iyada oo tababaraha cusub ee Xavi uu u muuqday in loo balan qaaday in kooxda la horumarin doono bilowga 2022.
Isagoo hadlayay intii lagu guda jiray bandhigga Dani Alves Arbacadii, Alemany ayaa u muuqday inuu sheegay in saxiixyada cusub aysan macquul aheyn laakiin wuxuu ku adkeystay in kooxda “ay ka shaqeyneyso xaalado kala duwan”.
“Janaayo, waan arki doonaa [haddii ay jiraan saxiixyo],” Alemany ayaa ka sheegay bandhigga Alves. “Waxaa jira bil iyo bar, waxaana ka shaqeyneynaa xaalado kala duwan, maanta laga bilaabo ma jirto suurtagal ah inaan saxiixyo sameyno bisha Janaayo, 1-da, waan arki doonaa.”
Barcelona ayaa la filayaa in ay soo galaan suuqa amaahda marka uu furmo suuqa bisha Janaayo, iyadoo Manchester City xidigeeda Raheem Sterling uu ku bartilmaameedka kooxda.
Weeraryahanka RB Leipzig Dani Olmo ayaa sidoo kale weli lala xiriirinayaa kooxda, laakiin kooxda Catalan ayaa la sheegay inay wajaheyso inay weyso xiddiga reer Spain ee Manchester United